China Transfluthrin Mosquito Coil Repellent Pyrethroid ndị na-emepụta ihe na ndị na - eweta ya. Senton
Transfluthrin anwụnta eriri igwe ọgwụ ọchụ Pyrethroid
Aha ngwaahịa Ntughari
CAS Mba 118712-89-3
Ọdịdị Kristal na-enweghị agba
Njupụta 1.507 g / cm3 (23 ° C)
Ebe mgbaze 32 ° C (90 ° F; 305 K)
Isi mmiri 135 ° C (275 ° F; 408 K) na 0.1 mmHg ~ 250 ° C na 760 mmHg
Solubility n'ime mmiri 5.7 * 10−5 g / L.
Ntughari bụ na-eme ihe ngwa ngwa pyrethroid Ahụhụ na-anọgidesi ike.O nwere usoro ihe omimi C15H12Cl2F4O2.Enwere ike iji transfluthrin n'ime ime ụlọ megidere ijiji, anwụnta, mothes na ọchịcha.Ọ bụ ihe dị ntakịrị na-agbanwe agbanwe ma na-eme dịka onye na-akpọtụrụ na inhalation.Transfluthrin na-bụ elu dị irè na obere nsi ọgwụ ahụhụ pyrethroidnwere ụdị ọrụ dị iche iche. Ọ nwere inspiratory siri ike, kọntaktị igbu ma na-arụ ọrụ. Ihe omume a kariri allethrin. Ọ nwere ikenjikwa Ahụike Ọha pestsna ụlọ nkwakọba ihe pests n'ụzọ dị irè. Ọ nwerengwa ngwa knockdown mmetụta na dipteral (eg anwụnta) na-adịgide adịgide ihe mmapụta ọrụ ka ochicha ma ọ bụ ahụhụ. Enwere ike ịhazi yadị ka anwụnta na-agbakọta, ute, ute. N'ihi oke alụlụ dị n'okpuru okpomọkụ nkịtị, a ga-ejikwa Transfluthrin rụpụta yaọgwụ ahụhụ ngwaahịa na-eji maka mpụga na njem.
Chemical usoro C15H12Kl2F4O2
Oke molar 371,15 g · mol.1
Njupụta 1,507 g / cm3 (23 Celsius)
Solubility n'ime mmiri 5.7 * 105 g / L.
Solubility na hexane, isopropanol, toluene, dichloromethane soluble
Nchekwa: Echekwara na akọrọ na ventilated ụlọ nkwakọba ihe na nchịkọta akara ma pụọ ​​na mmiri. Gbochie ihe site na mmiri ozuzo ma ọ bụrụ na a ga-agbaze ya n'oge njem.
Imidacloprid, Azamethiphos, Methoprene, Diflubenzuron na ndị ọzọ nwekwara ike ịchọta na ụlọ ọrụ anyị. Anyị nwere ike ịnye gị ngwaahịa dị mma nwere ọnụ ahịa ezi uche dị na ya, ọ bụrụ na ịchọrọ ngwaahịa anyị, biko kpọtụrụ anyị.
Na-achọ ezigbo Anwụnta Na-ahụ Maka Ahụhụ na ndị na-ere ọgwụ? Anyị nwere nhọrọ dịgasị iche iche na nnukwu ọnụ ahịa iji nyere gị aka ịmepụta ihe. All n'ime ime ụlọ gburugburu megide ijiji na-mma na-ekwe nkwa. Anyị bụ ndị China si Factory nke igbochi Ngwọta nke Ọrịa Hygienic Nchekwa Pests. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla, biko nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị.
Nke gara aga: Nkume osisi Hormone Gibberellic acid
Osote: Ezinyere Ezin'ụlọ Na-agba Ahụhụ Diethyltoluamide
Nonsystemic Organophosphate Ahụhụ zinmụ ahụhụ Diazinon
Na-abụghị nke systemic Acaricide na ahụhụ Amitraz
Ọgwụ Pesticides Ethofenprox 95% TC
Pit Control Ahụhụ Acaricide Amitraz
Azụmahịa na ụlọ na ụlọ
Ọsọ ọsọ Na-eme Agrochemical Ahụhụ Imiprothrin